Codso Kulan Kulan
Fadlan ogsoonow: Xafiisyadeena hadda waa u xiran yihiin xubnaha dadweynaha, waxaanan joojinay adeegsiga goobaha ay ku shiraan dadka martida ah ee dibedda ah, maaddaama aan sii wadno kormeerka horumarka la xiriira coronavirus-ka cusub. Fadlan aragkeena jawaabta coronavirus faahfaahin dheeraad ah.
Waanu ku faraxsanahay in aan la wadaagno meeshiina kulankayaga oo lala yeesho beelaha beesha. Dhisidda xidhiidhka iyo shirarka ayaa muhiim u ah si ay nooga caawiso inaan gaarno yoolalka barnaamijkeena.
Dhamaan dadka deeqda bixiya ee hadda shaqeeya iyo lamaanayaasha kale waa la soo dhaweynayaa si ay u soo gudbiyaan codsiyada booska kulanka. Waxaan qaban karnaa kooxaha ilaa 65 qof inta lagu jiro saacadaha ganacsiga caadiga ah (8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo). McKnight waxaa ka go'an inuu abuuro xarun guud oo loogu talagalay dadka oo idil, waxaanan samayn doonnaa sida ugu fiican ee aan u xushmeyno waxqabad kasta iyo ujeedooyin loo baahan karo hoy. Eeg faahfaahinta hoose.
Waxaa dhici karta in dib loo dhigo xagaaga sababtoo ah dhismayaasha iyo mashaariicda dhismaha ee aagga (sida I-35W badhtamaha magaalada). Fadlan sida ugu habboon u qorshee.
Qariiradaha qolka iyo macluumaadka A / V. Raac xiriiriya jaantusyada qaaska ah iyo qaababka maqalka.
Liiska A / V
Si looga caawiyo kooxaha samaynta codsiyada qolka, waxaanu soo ururinay jawaabaha su'aalaha badanaaba la isweydiiyo. Fadlan akhri macluumaadka asalka ah ee hoos ku qoran ka hor inta aadan soo gudbin codsi.
Yaa xafidi kara booska kulamada xafiisyada McKnight?
Waxaan soo dhaweyneynaa codsiyada macaamiisha ee ka yimaada deeq bixiyayaasha McKnight, lammaaneyaasha beesha, iyo maalgelinta iskaashiga. Nasiib darro, ma aqbali karno codsiyada kooxaha kale.
Goorma ayay yihiin goobaha lagu kulmo McKnight?
Iyadoo dhawr jeer laga reebayo, boosaska kulankeena waxaa la heli karaa isniinta ilaa jimcaha inta u dhaxaysa 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. Waxaan kugula talineynaa kulannada in laga bilaabo 8:30 duhurnimo ama wakhti dambe si loogu oggolaado waqtiga hore ee miiska si ay u hubiyaan martida.
Miyaan qaban karaa shir maalin ka hor?
Haa, badanaa waxaan helnaa codsiyada in ka badan hal taariikh ama kulamo dhowr ah. Waxaan isku dayeynaa inaan ku daboolno codsiyadaas mar kasta oo ay macquul tahay.
Sideen ku tagaa xafiisyada McKnight?
Waxaan ku yaalay madaarka Milliga City ee magaalada Minneapolis. Cinwaankayagu waa: 710 South 2nd Street, Suite 400, Minneapolis, MN 55401. Albaabka dhismahayaga ee Koofurta 2aad waa albaabka ugu dhow Chicago Avenue. Qaado wiisharka ilaa dabaqa afaraad.
Waxaan si fudud u heli karnaa baaskiil iyo gaadiidka dadweynaha. Khadka Cagaaran iyo Khadka Cagaaran wuxuu istaagaa Baanka Bankiga Istarliinka Maraykanka. Waxa kale oo aad dhigan kartaa Xarunta Quarter Ramp ee waddada ama mid kasta oo ka mid ah meelihii mitir ee laga heli karo South 2nd Street iyo agagaarka.
Miyuu McKnight siinayaa shaqaale kasta oo shirarka ah? Ma jiraan shuruudo shaqaale?
Wakiilka shaqaalaha McKnight waa inay joogaan goobta si ay u taageeraan dhammaan kulamada. Inkastoo shaqaalaha McKnight laga yaabo inay diyaar u yihiin inay ku caawiyaan, waxaan fileynaa inaad nadiifineyso qolalka qolalkaaga ka dib.
Goorma ayaan dib u maqli doonaa codsigayga kulanka?
Qof ka socda shaqaalahayaga ayaa kula soo xiriiri doona 3-4 maalmood oo shaqo gudahood. Ka fiirsashada qorsheynta iyo baahida aasaasiga ah, ma xaqiijin karno codsiyada boosaska kulanka in ka badan lix bilood.
Maxay ku habboon tahay iyo codsiyada McKnight siin kara martida?
McKnight waxaa ka go'an inuu abuuro xarun loo dhan yahay oo loogu talagalay dhammaan dadka awood u leh,
aqoonsiga, asalka dhaqanka.
Waxaan u hoggaansameynaa dhamaan sharciyada khuseeya Xeerka Americans with Disabilities Act.
Dhamaan aqoonsiyada jinsiga waxaa lagu soo dhaweynayaa Hay'ada. Calaamadaha ku yaalla munaasabadaha kala duwan ee dheddig-laboodka jinsiga ayaa sheegaya: "Dhammaan waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay isticmaalaan musqulaha sida ugu haboon aqoonsigooda."
Waxaan ku dadaaleynaa inaan ku qadarino dhaqano kasta oo aan u baahanno in aan hoy u galno inta aan balaarineyno hawlaha ganacsiga, siyaasadaha, iyo dhaqanka.
Waxaan khibrad u leenahay bixinta deegaannada codsiyada soo socda ugu yaraan hal ogeysiis todobaad ah:
Goob gaar ah oo loogu talagalay hooyooyinka kalkaalinta.
Meesha gaarka ah ee salaadda.
Deegaan bilaash ah oo udambeeyay. McKnight marwalba waxay ku dadaaleysaa inay noqoto mid aan cadaan ahayn, laakiin shaqaalaha iyo dadka soo booqdayba waxay yeelan karaan xasaasiyad iyo / ama xasaasiyad alerjiyo kala duwan. Fadlan nala soo socodsii wixii xasaasiyad ah.
Isticmaalka ruux ahaaneed ee dhirta sida dhirta, macaan, ama geed kedar ah. Waxaan awoodnaa inaan codsanno codsigan inta lagu jiro saacadaha ganacsiga illaa 3:30 galabnimo Ka dib wakhti ka dib, Foundation wuxuu soo gudbinayaa xukun weyn laakiin wuxuu tixgelin doonaa in la sii wadi karo haddii ay saameyntu tahay mid macno leh oo ay ku kordhinayso qiimaha kulanka.
Waxaan isku dayeynaa inaan rajeyno oo aan ku daboolno dhammaan codsiyada, laakiin waxaan qirsanahay inaanan ogeyn dhammaan diin, dhaqan, ama waxqabadyo kale ee qof kasta oo soo booqanaya. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad gaarto Agaasinka Dib-u-dejinta iyo Agaasimaha oo ku saabsan habdhaqanka iyo ciriiriga u baahan kara hoy.
Meelaha dheeraadka ah miyaan boos ka heli karaa boosaska jimicsiga?
Marka la eego qaabeynta iyo naqshadeynta xafiisyadayada, meeshanada kulankeena waxaa loo isticmaalaa kulammo u baahan hal qol kaliya. Waanu qaban doonaa codsiyada meel bannaan oo ah marka ay suurtagal tahay.
Diyaar ma u tahay inaad codsato meel kulan?
Fadlan buuxi foomka codsiga iyo qof ka socda shaqaalahayaga ayaa kula soo xiriiri doona wax yar. Fadlan ogsoonow: Buuxinta foomka ma hubinayso helitaanka ama isticmaalka xarunta McKnight.